Ahoana no ahafahako mahazo mahia ao anatin'ny 1 herinandro? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Fomba ahazoana mahia mandritra ny herinandro - ny fomba fikirakirana
Fomba ahazoana mahia mandritra ny herinandro - ny fomba fikirakirana
Ahoana no ahafahako mahazo mahia ao anatin'ny 1 herinandro?
Tadidio fa tsy programa na vahaolana maharitra ity.
Mihinana karbaona vitsy kokoa sy maro hafavakio nyproteinina.
Mihinàna sakafo manontolo ary fadio ny ankamaroan'ny sakafo tsy voavaha.
Ahenao ny fatran'ny kaloria anao (amin'ny fanarahana ireo torohevitra ireo)
Asandrato ny lanjany ary andramo ny fiofanana elanelam-potoana avo lenta.
Mavitrika ivelan'ny gym.
Tetezamita mankany amin'ny fifadian-kanina miserana.
manankarena sy soroka ka sokafy ny trisepo amin'ny sisiny mifanandrify amin'ny kiho amin'ny gorodona dia miolikolika ary ny tànany dia manondro mankany aloha, mitroka amin'ity toerana ity ary misento rehefa mitondra ny tananao amin'ny toeran'ny vavaka ianao, mifoka rivotra rehefa manokatra ny tananao hiakatra indray ry zalahy, ny manaraka dia lalitra an-tratra, ka ny trisep mifanandrify amin'ny soroky ny gorodona mifanakaiky amin'ny gorodona dia manomboka amin'ny soroka eo alohanao rehefa mifoka rivotra eto ianao rehefa manokatra ny trisepo amin'ny sisin'ny Reverse sy ny famerimberenana ny fampiharana farany dia natao ho an'ireo trisep ireo, mampifanintona indray ny rantsan-tananao indray ary manaova totohondry amin'ny tananao, eo ambonin'ilay lohanao ihany ny tananao raha ankafizinao izany na izany aza tiako be ianao ary mahita anao manaraka
Ahoana no ahitanao mahia ao anatin'ny 2 andro?
Ahoana no mampihena lanja sy mampihena ny tavy kibo ao2 andro: Torohevitra tsotra 5 mifototra amin'ny fikarohana siantifika
Manampy proteinina bebe kokoa amin'ny sakafonao.
Manaofibre ny namanao akaiky indrindra.
Misotroa rano bebe kokoa.
Esory ny zava-pisotro mamy.
Mandehana an-tongotra 15 minitra isaky ny avy misakafo.
Ahoana no ahitanao mahia ao anatin'ny 7 andro?
Soso-kevitra momba ny fihenan-danja:hitadysakafo misy solika.
Tohizo ny herinao amin'ny alàlan'ny fakana sakafo izay hanampy anao handoro kaloria bebe kokoa mandritra ny fanazaran-tena sy mandritra ny fotoanaandro. Hoy i Greaves, 'Mandehanaho an'ny gliosidaina tsara, toy ny voamaina, ary voankazo sy legioma betsaka.
Ny fampihetseham-batana an-trano anio dia fahaverezan'ny tavy kibo 5 minitra. Eny, dimy minitra fotsiny! Saingy afaka manome toky aho fa hahatsapa ho may ianao. Maniry ny hanaovanao izany mandritra ny fito andro misesy.
Izay ihany! Dimy minitra mandritra ny fito andro misesy, ary azoko antoka fa hanomboka hahita sy hahatsapa valiny ianao, sahala amin'ireo zazavavy ireo! Ankehitriny, mazava ho azy ianao dia afaka manao mihoatra ny iray fihodinana, raha tianao dia afaka manao roa ianao. Afaka manao telo ianao! Ampahafantaro ahy ny fomba ahombiazanao amin'ireo hevitra etsy ambany! Tsy mila fitaovana. Avelao isika hahatsapa ny may! Manomboka amin'ny tongotra havia mitsingevana.
Ny sandry havia, eo ambanin'ny sisiny. Hantsaka manerana ny vatana isika. Avereno indray ny kitrokelinao avy eo.
Tsara, avy eo dia tiako ianao hiditra anaty situp feno. Mitehafa, avy eo ahitsy ny tongotrao. Mifamadika lafiny.
Miakatra sy midina isika. Asa tsara. Avy eo hipetraka ho ahy.
Mipetraha ambony amin'ireny vodin-kazo ireny. Hihodina ianao, hanenjana ny abs marina. Avy any hatrany hatrany hatrany.
Miampita sy midina indray. Manaraka izany dia fihodinana rosiana. Miaraka ny lohalika.
Hivadika amin'ny lafiny iray isika. Raha te hanamafy azy ianao dia atsangano ny tongotrao. Ny tanana roa, mifanila.
Asa lehibe. Midina amin'ny lainga. Apetraho eo ambanin'ny lamosinao ambany ny tananao amin'ny endrika diamondra.
Atsangano avy eo ny tongotrao. Aondriho hatrany araka izay tratranao izy ireo. Daka amin'ny flutter, ambony sy ambany, mandritra ny valo.
Avy eo sokafy sy akatona mandritra ny efatra. Tazomy eo ny tongotrao. Hianjera tongotrao indray ianao ary hiakatra indray.
Atsangano ary ampidino ny tongotra roa avy eo. Asa tsara. Raha manosihosy ireo tongotra ireo isika dia mahatratra tampoka ankehitriny.
Hatramin'ny kitrokely. Hamafiso ny abs anao, ataovy ny andilanao, ary mankanesa ao amin'ny zana-kazo ho an'ny fanazaran-tena farany hataontsika. Midina amin'ny sandrinao ianao.
Mankany amina valahana isika ary avy eo mankany amin'ny tsofa hazo. Ka eto izahay. Misitrika isika, avy eo mandroso.
Narodanao io! Aza adino ny manindry ny bokotra 'thumbs up'. Tena manohana ny fantsoko io. Tsindrio ihany koa ny fisoratana anarana satria mampakatra lahatsoratra fiofanana isan'andro aho.
Tsy tiako tsy ho azonao io! Ka tsindrio ny Subscribe, andao alefa 1 tapitrisa ity vondrom-piarahamonina ity! Izay no tanjona!
Inona no olona matavy mahia?
Tavy mahiadia teny iray milaza ny fananana isan-jato isan-jaton'ny vatanamatavyary ny habetsaky ny hozatry ny hozatra, na dia eo aza ny fanao BMI ara-dalàna. Ny olona manana an'io vatana io dia mety atahorana hihombo diabeta sy aretim-po.8. 2021.
Rehefa nanomboka ny dia nataoko aho dia mahia sy mahia. Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara aminareo izay tena nanampy ahy hanala an'io aretina io aho. Manentana anao aho hijery ity lahatsoratra ity hatramin'ny farany mba hanananao sary mazava momba ny fomba fanatanjahan-tena sy izay hohanina handresena ilay olana matavy.
Voalohany indrindra, ny tavy manify dia tsy karazana vatana fa fanjakana izay fahitanao akanjo manify ary rehefa manala akanjo ianao dia fantatrao fa manana tavy matavy amin'ny vatanao ianao. Izany dia satria ambany ny haben'ny hozatrao ary matavy amin'ny vatana.
Ny antony mahatonga ny mahia amin'ny tavy dia mety ho safidy ratsy amin'ny sakafo, sakafo kely loatra, na cardio be loatra. Mandrosoa lalina amin'ny fisainana ary andao hitazona ity lahatsoratra ity ho vahaolana tsotra. Misavoritaka ny ankamaroan'ny olona rehefa manotra na manapaka aloha isika.
Eny, ny ampahany betsaka aloha ary avy eo ny fanapahana dia tsy safidy ratsy, saingy mieritreritra aho fa tsy mpanao bodybuilding. Ny tanjontsika dia tokony hanatsara hatrany ny fitambaran'ny vatantsika ary izany dia tsy azo atao raha tsy amin'ny fampitomboana ny hozatra sy ny fihenan'ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana. Ary avelao aho hiteny aminao, arakaraky ny hamaroan'ny hozanao dia ho mora kokoa aminao ny hampihena ny isan-jaton'ny tavy amin'ny vatana.
Ny tanjonay dia ny mijery mahia sy atletika mandritra ny taona. Ny vahaolana matavy manify dia mipoitra amin'ny lafin-javatra telo. Fanatanjahan-tena, sakafo ary torimaso.
Ary amin'ity lahatsoratra ity, hodinihintsika amin'ny antsipiriany ireo telo ireo. Andao atomboka amin'ny fiofanana. Ny fifantohanao dia tokony ho fampiofanana ho an'ny tanjaka, fa tsy ny fampiofanana amin'ny tanjaka ho an'ny kardio dia tena ilaina tokoa amin'ny fananganana hozatra.
Ka manoro hevitra anao aho hampiofana mandritra ny 5 andro ary hiala sasatra mandritra ny 2 andro. Mandritra ireo 5 andro ireo dia tokony hampiofana vondrona hozatra iray ianao ao anatin'ny iray andro. Ankehitriny ny fotoana fampihetseham-batanao dia tokony manomboka amin'ny 45 minitra ka hatramin'ny 60 minitra farafaharatsiny.
Manandrama manainga lanja mavesatra koa. Rehefa miteny mafy aho izao dia midika hoe mafy arakaraka ny herinao. Miezaha koa hampitombo ny fanazaran-tena amin'ny lanjan'ny vondrona hozatra herinandro aorian'ny herinandro.
Manaova andiany 3 isaky ny fanazaran-tena. Ny laharam-pahamehana dia mety ho 12, 10, ary 8. Ankehitriny ho an'ny cardio.
Araka ny nolazaiko dia tsy tokony hanao cardio be loatra ianao. Manoro hevitra anao aho mba hitazomanao indroa isan-kerinandro ny fanabeazana kardio, ary ny fiofanana aretin-tratrao dia tsy tokony haharitra 5 ka hatramin'ny 10 minitra. Ny fampiofanana kardio mahomby dia tsy azo atao raha tsy amin'ny sprinting.
Ka aorian'ny fiofanana matanjaka dia afaka manao sprint 3 ka hatramin'ny 5 ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra ianao. Matokia ahy fa manampy be dia be ny tokony ho fohy nefa henjana. Ka aorian'ny fiofanana matanjaka dia azonao atao ny mitazona ny abs mandritra ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra.
Azonao atao ny mandrafitra ny fampihetseham-batanao mba hahazoanao abs amin'ny alatsinainy, talata sprint, abs indray alarobia, abs indray amin'ny alakamisy, ary abs indray ny zoma. Matokia ahy ny fomba andanianao ity fampiofanana 1 ora ity dia tena hamaritra ny hafainganan'ny valiny. Faharoa dia sakafo.
Ankehitriny ny sakafo no zava-dehibe indrindra. Ny dingana voalohany dia tokony hahitanao ny kaloria fitaizanao. Ankehitriny dia tokony hisafidy fihoaram-pefy kely ianao.
Ohatra, ny kaloria fikojakojana anao dia 2500. Ka raha mitazona fihoaram-pefy kely ianao dia midika izany fa tokony mihinana kaloria 2700 isan'andro ianao, mihinana vatomamy sy fako raha te hahazo. Tsia.
Azafady mba tsy hianjera amin'ny bulking maloto. Satria mampitombo ny tavy fa tsy ny hozatra fotsiny izany. Manoro hevitra anao aho hihinana 4 ka hatramin'ny 6 isan'andro.
Ataovy ambony proteinina ny sakafonao, mifandanja tsara amin'ny gliosida sarotra, tavy mahasalama ary vitamina Mineraly. Ny proteinina no macronutrient manan-danja indrindra amin'ny fananganana hozatra. Ataovy hatrany amin'ny 1.5 grama ka hatramin'ny 2 grama ny lanjan'ny proteinina ao amin'ny lanjan'ny vatana.
Ohatra, raha milanja 60kg ianao, dia alao antoka fa mandany proteinina 90 ka hatramin'ny 120 grama isan'andro ianao; raha resaka gliosida dia alao antoka fa mandeha miaraka amin'ny gliosida sarotra ianao toy ny mofo varimbazaha, vary volontany, oats, ovy ary voamaina hafa rehetra. Sorohy ny vary fotsy, ny mofo volontany, ny mofo fotsy, ovy ary ny maida. Mihinana sakafo madio sy voalanjalanja satria hanampy anao hahazo vokatra haingana indrindra.
Tonga amin'ny antony farany isika, dia ny torimaso. Ny sisa ataonao dia ny mifikitra amin'ny ora fatoriana ary mahazo torimaso mahasalama 7-8 ora isan'alina. Ka araho ny namana ireto torohevitra ireto ary raha manao izany ianao dia manome toky fa hahazo valiny ao anatin'ny volana maromaro.
Ka ry namana, antenaiko fa nahasoa ity lahatsoratra ity. Raha izany dia mba omeo thumbs up azafady. Ary tadidio ihany koa ny hisoratra anarana amin'ny fantsoko.
Vivek no anarako ary misaotra anao aho nijery.
Ahoana no fomba hanamafisako ny vatako mahia?
Manampy bebe kokoahozatraamin'ny-kevi-pitantananaary ny fihenan'ny tavy dia mahatonga anao ho mahia mahia, tsy lehibe kokoa. Ka ny fampiakarana lanja mavesatra kokoa miaraka amin'ireo reps vitsy kokoa (valo ka hatramin'ny 12 eo ho eo) ary ny miasa mandra-pahasasatra anao dia mandaitra kokoa amin'nytoninghozatra noho ny fanesorana lanja maivana kokoa. Tsy lazaina intsony fa mahomby kokoa ihany koa.
Ahoana no ahafantaranao raha matavy ianao?
Nomera BMI no natao hanomeianareohevitra momba ny vatana firymatavy anaomanana toy ny tahan'nynylanja hatramin'ny haavony. Izy io dia refesina amin'ny fandraisananylanja amin'ny kilao ary zaraonyhaavon'ny metatra toradroa. Ny vakiteny mihoatra ny 30 dia midikaianareo're matavy. Ny famakiana amin'ny 40 mahery na mahery dia matavy loatra.
Inona ny tavy mahia?
Tavy mahiadia teny iray milaza ny fananana isan-jato isan-jaton'ny vatanamatavyary ny habetsaky ny hozatry ny hozatra, na dia eo aza ny fanao BMI ara-dalàna. Ny olona manana an'io vatana io dia mety atahorana hihombo diabeta sy aretim-po.9. 2021.
Inona no atao hoe olona mahia?
Ilay entina.Tavy mahiadia teny iray milaza ny fananana isan-jato isan-jaton'ny vatanamatavyary ny habetsaky ny hozatry ny hozatra, na dia eo aza ny fanao BMI ara-dalàna. Ny olona manana an'io vatana io dia mety atahorana hihombo diabeta sy aretim-po.8. 2021.
Aleo matavy sa mahia?
Raha toa ianao kamahiafa ny fitondrana lanja be loatra manodidina ny afovoanao noho ny mety hampidi-doza ny fahasalamanao. Hitan'izy ireo fa ny olon-dehibe manana lanja ara-dalàna dia manana taham-paharetana maharitra indrindra raha oharina amin'ny vondrona rehetra, na inona na inona BMI.
Inona avy ireo famantarana ny tavy?
Ny lanjany be loatra dia manome tsindry fanampiny amin'ny taova, anisan'izany ny havokavokao. Raha asa tsotra, toy ny famatorana ny kiraronao na fanadiovana efitrano iray, dia mitarika ho amin'ny havizanana, fofohana fohy, na fahasahiranana miaina, mety manana olana amin'ny lanjanao ianao. Toy izany koa, mavesatra loatra arymatavy loatraolona atahorana kokoafampandrosoanasohika.
Impiry aho no tokony hampiofana mba hihazakazaka haingana?
Fanatanjahan-tena enina andro isan-kerinandro mandritra ny 30 minitra isaky ny fotoam-pivoriana hanombohana. Ampitomboy tsikelikely ny faharetan'ny fampihetseham-batana satria mihamora kokoa amin'ny herinandro ho avy. Andro fampiofanana kardio sy fanoherana hafa, toy ny fanaovana kardio amin'ny alatsinainy, fanoherana ny talata, kardio indray amin'ny alarobia, sns.
Inona no fomba tsara indrindra hialana haingana?
Ny fanapahana tavy dia fomba iray mahomby hampihena anao satria hofoanana ny kaloria betsaka indrindra. Ny grama iray grama dia mitovy amin'ny kaloria 9 amin'ny kaloria 4 isaky ny grama gliosida na proteinina. Ny sakafonao dia tokony ahitana tavy 20 ka hatramin'ny 35 isan-jato. Mba hahafoana haingana ny lanja dia azonao atao ny mijanona amin'ny faran'ny farany an'io faritra io.
Inona no tokony hohaniko mba hihinanana sakafo mahia?
Diet Dos sy Don'ts. Mba hihinana mahia dia tsy maintsy mihinana tsara ianao. Mora kokoa ny manapaka kaloria 500 isan'andro noho ny mandoro azy amin'ny fitoeran-kilaometatra. Mihinana sakafo kely tokony ho in-dimy isan'andro - sakafo telo sy tsakitsaky roa. Ny sakafo tsirairay dia tokony ahitana voamaina, legioma ary proteinina mahia.